यसरी हुँदैछ, कार्की र शर्मावीच भाले भिडन्त (भिडियो) | Kendrabindu Nepal Online News
783171 37743 580675 164753
यसरी हुँदैछ, कार्की र शर्मावीच भाले भिडन्त (भिडियो)
७ मंसिर २०७४, बिहीबार १२:३४
आगामी मंसिर २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि झापामा कुल पाँच लाख ८५ हजार १६६ मतदाता रहेका छन् ।
तीमध्ये महिला दुई लाख ९६ हजार ३४१, पुरुष दुई लाख ८८ हजार ८१२ र तेस्रो लिङ्गी नौ जना रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।
पछिल्लो निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणअनुसार पाँचवटा निर्वाचन क्षेत्र कायम भएको यस जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्र नं १ मा कुल एक लाख पाँच हजार ४७५ मतदाता रहेका छन् । तीमध्ये महिला ५२ हजार ८४६ छन् ।
त्यस्तै निर्वाचन क्षेत्र नं २ मा ६० हजार १४५ महिला र पाँचजना तेस्रो लिङ्गी गरी कुल एक लाख १८ हजार २०४, निर्वाचन क्षेत्र नं ३ मा महिला ५७ हजार ५७० सहित एक लाख १४ हजार ५८६, निर्वाचन क्षेत्र नं.४ मा महिला ५५ हजरा २०७ र तेस्रो लिङ्गी एकजना गरी कुल एक लाख नौ हजार ४०१ तथा निर्वाचन क्षेत्र नं ५ मा महिला ७० हजार ५८४ र तेस्रो लिङ्गी तीन जना गरी कुल एक लाख ३७ हजार ५६५ मतदाता रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।
यी मध्येका आजको रिपोर्टमा हामी क्षेत्र नं १ को चुनावी प्रतिस्पर्धा केलाउने कोशिस गर्दैछौं ।
झापा क्षेत्र नम्बर १ मा हुने निर्वाचनलाई बौद्धिक प्रतिस्पर्धाका रुपमा हेरिएको छ । यहाँको क्षेत्रका मतदाताले आफ्नै रोजाइका नेतालाई मत हाल्ने विश्लेषण गरिएको छ । वाम गठबन्धनबाट माओवादी नेता राम कार्की र कांग्रेसका युवा नेता विश्वप्रकाश शर्मा बीच मात्रै दुइटा कुरामा मत भिन्नता देखिएको छ । स्थानीयले भन्न थालेका छन्, शर्मा स्थानीय र कार्की पाहुना नेता । यी दुवै नेताहरु राष्ट्रिय रुपमा समेत परिचित छन् । जनताको पक्षमा आवाज उठाइरहेका शर्मा र सञ्चारमन्त्री हुँदा शालिनता प्रदर्शन गरेका कार्की दुवैलाई राजनीतिक रुपमा लामो रेशको घोडा मानिन्छ ।
झापा क्षेत्र नं. १ मा मेचीनगर नगरपालिकासहित भद्रपुरको वडा नं. ९, १० र बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको वडा नं. ४, ५, ६ र ८ पर्छ । यहाँको जम्मा मतदाता संख्या १ लाख ९ हजार ६ सय ७६ छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणामलाई आधार मान्दा यहाँ नेपाली कांग्रेसको २५ हजार ५ सय १ मत छ भने एमालेको २५ हजार ६३ मत छ । त्यसैगरी माओवादी केन्द्रको ९ हजार ८ सय ८८ मत छ । यो मतलाई आधार मान्ने हो भने झापा–१ मा बाम गठबन्धनको ३४ हजार ९ सय ५१ मत पुग्छ । राप्रपाको १ हजार ३ सय ३३ र संघीय समाजवादी फोरमको ४ सय ७० मत छ ।
यो परिणामलाई आधार मान्दा यहाँ वाम गठबन्धन ९ हजार ४ सय ५० मतले कांग्रेसभन्दा अगाडि छ । तर कांग्रेस नेता विश्वप्रकाश शर्मा युवा पुस्तामाझ लोकप्रिय भएकाले उनको पल्ला बढ्ने कायृकर्ताकको तर्क छ ।
उनी ०७० सालको निर्वाचनमा एमालेका उम्मेदवार रविन कोइरालासँग ६ सय ८९ मतान्तरले पराजित भएका थिए । त्यसवेला विश्वप्रकाशलाई अधिकांश समय काठमाडौं बसेको भन्दै स्थानीयले ‘टुरिष्ट’ उम्मेदवारको संज्ञा पनि दिएका थिए । त्यसपछि उनले जिल्लामा आफ्नो सक्रियतालाई बढाए । र, गाउँमा विकासका गतिविधिहरुलाई अघि बढाए ।
यद्यपि, ०७० सालमा कांग्रेस नेता शर्मालाई भिराइएको ‘टुरिष्ट’ उम्मेदवारको उपमा अहिले माओवादी उम्मेदवार कार्कीलाई भिराइरहेका छन् स्थानीयले ।
वाम गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका सुरेन्द्र कार्की अर्थात राम कार्की ०७० सालमा समानुपातिकतर्फबाट संसदमा निर्वाचित भएका थिए । त्यसअघि उनी ०६४ सालको निर्वाचनमा ताप्लेजुङ क्षेत्र नं. १ बाट पराजित भएका थिए ।
ओखलढुंगा पुख्र्याैली थलो भएका कार्की भूमिगतकालमा झापामा बसेका थिए । त्यसयता पनि उनको झापा आगमन बाक्लै भइरह्यो ।
आफूले विवाह गरेर श्रीमती भित्राएको ठाउँ पनि झापाको मागुरमाणि भएको भन्दै झापासँग भावनात्मक सम्बन्ध रहेको माओवादी नेता कार्कीले चुनावी सभामा बताउने गरेका छन् ।
त्यतिबेला आफ्नो मुख्य केन्द्र झापा नै रहेको कार्की बताउँछन् । बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको बुधबारेमा कार्र्कीको अचल सम्पत्तिसमेत छ । स्थानीय चुनावको अङ्कगणित र वाम गठबन्धनपछि जनतामा आएको उत्साहले कार्कीको जित निश्चित भएको माओवादी नेताहरु बताउँछन् ।
युवामाझ लोकप्रिय भएकाले विश्वप्रकाशले जित्ने कांग्रेस कार्यकर्ताको दाबी छ । कांग्रेसका नेताहरु झापा–१ मा आयातीत प्रतिद्वन्द्वी भएका कारण आफूहरुको जीत सहज भएको दाबी गर्छन् । मेचीनगर र बुद्धशान्ति गाउँपालिकामा कांग्रेस उम्मेदवार विजयी हुनाले पनि आफ्नो पक्षमा लहर सिर्जना गरेको विश्वप्रकाशको दाबी छ ।
झापा–१ मा साना दलहरुलाई आफ्नो पक्षमा पारेर वाम गठबन्धनलाई उछिन्ने दाउ पनि कांग्रेसको छ । घोषित रुपमा नभए पनि संघीय समाजवादी फोरम, लिम्बुवान, राप्रपा प्रजातान्त्रिक लगायतका साना दलले पनि आफूहरुलाई समर्थन गर्ने कांग्रेस नेताहरुको दाबी छ । तर पार्टी भित्र र वाहिरका चुनावमा हार बेहोर्दै आएका शर्मालाई कतिपयले ‘अनलक्की’ नेता समेत मान्दछन् ।
स्थानीय चुनावको परिणामका साथै झापा जिल्ला वामपन्थीहरुको किल्ला भएकाले पनि आफ्नो जित निश्चित भएको कार्कीको तर्क छ ।
राजनीतिक वृत्तमा दुरदृष्टि र बौद्धिक नेताका रुपमा परिचय बनाएका बाम गठबन्धनका कार्की र कांग्रेसका शर्मा बीचको चुनावी भिडन्त अत्यन्त रोचक हुने अनुमान गरिएको छ । दुवैले शालिन नेताको समेत परिचय बनाएको हुनाले अन्यत्रभन्दा झापा १ को चुनाव भिन्न र उदाहरणिय हुने आम विश्लेषण रहेको छ ।
Prevमंसीर ८ गते नेपाल बन्द हल्ला मात्र !
पत्नीको उपचारमा जान अनुमति माग्दै शरीफ विशेष अदालतमाNext
झापा बारका तर्फबाट कोरोनाविरुद्धको कोषमा ५१ हजार सहयोग
आगलागीबाट २२ घर नष्ट
आठ कक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीको यस्तो चमत्कार